जन्मदिनमा आयुषसंग प्रियंकाको विवाह? भ्यालेन्टाइन डे मा हुदैछ बिशेष तयारी – Khabar Silo
यतिबेला अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको विवाह मिति चर्चामा रहेको छ। अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीसंग विवाह बन्धनमा बाधिन लागेकी प्रियंका को विवाह मितिलाई लिएर चारैतर्फ कौतुहलता रहेको छ।
यहि बिचमा प्रियंका र आयुष्मान फागुन १५ गते विवाह बन्धनमा बाधिन लागेको विश्वसनीय श्रोतले जनाएको छ । फागुन १५ अभिनेत्री कार्कीको जन्मदिन हो। यहि दिन उनि आयुष्मानको घर भित्रिने तयारीमा रहेको बुझिएको छ।
यहि बिषयमा प्रश्न गर्दा प्रियंका भन्छिन्, ‘आयुष र म यहि भ्यालेन्टाइनमा विवाह मिति सार्वजनीक गर्दैछौ। जति पनि हामीलाई शुभकामना दिने र हाम्रो विवाह मिति कुर्ने दर्शक हुनुहुन्छ उहाहरुलाई त्यहि दिन थाह हुनेछ।’
मराठा साम्राज्यका शुरवीर सैनिक तानाजीको आदम्य साहस देखाइएको फिल्म ‘तानाजीः द अनसङ वारियर्स’ले रिलिजको तेस्रो हप्ता पनि उत्साहजनक कमाई गरिराखेकाे छ। अजय देवगन, काजोल, सैफअलि खानको मुख्य भूमिका रहेको तानाजी तेस्रो हप्ताको पहिलो आइतबारको कलेक्सनमा ‘बाहुबली’, ‘टाइगर जिन्दा है’सहित ९ अत्याधिक सफल चलचित्रलाई पछाडि पारेको छ। बजार विश्लेषक तरण आर्दशका अनुसार १० जनवरीमा रिलिज भएको […]
सानै उमेरमा निकै सुमधुर गीतहरु गाएर चर्चामा रहेका गायक प्रेम परियार यतिबेला भने हराए जस्तै भएका छन् । धेरै भयो उनको गीत सुनिएको छैन, आखिर कहाँ के गर्दैछन् त, प्रेम परियार ? शिशिर भण्डारीले मिडियामा ल्याईरहँदा प्रेमले आफु नयाँ गीतको तयारीमा रहेको बताए । साथै उनले आफु बिचमा हराउनुको कारण पनि खुलाए । धादिँगको बिपन्न […]